Ummeli WaseMissouri Cannabis - UDan Viets Uyakhuluma Cannabis eMissouri
IMissouri Cannabis Law ne-Lawyer Dan Viets
Ngabe iMissouri izosebenzisa ngokusemthethweni i-Cannabis yabantu abadala nge-2020?
Ummeli we-cannabis waseMissouri, UDan Viets, usebenzise umthetho eMissouri iminyaka engaphezu kwengu-30. Uchithe isikhathi sakhe esiningi evikela abaseMissourians emithethweni ye-cannabis esephelelwe isikhathi. Ngaphezu kokuba yilungu lebhodi leNorML futhi ungumtholi kaConan O'Brien kuMklomelo WeTonight Show "Audiencey Award" wokuthi "Ufuna Ukufana Noprofesa WeKolishi Ongahlala Akutholise Ukhula". Ungummeli wesikhathi eside we-cannabis ohola emzabalazweni wokuzijabulisa we-cannabis eMissouri. Kuleli sonto uDan wehle ezokhuluma ngemithetho yaseMissouri cannabis nokuthi bahleleleni uSuku Lokukhetha.
Ngubani uDani Viets?
Ummeli we-cannabis waseMissouri, uDan Viets, njengamanje usebenza ngaphandle kweColombia, MO
Kuvikela amacala e-cannabis obugebengu
I-DirectML yeBhodi yabaqondisi kanye noMxhumanisi Wendawo YaseMissouri ye-NORML
Uvele kuyo yonke inkantolo yesifunda neye-federal eMissouri
Ukuzijwayeza umthetho kusukela ngo-1986
IMissouri kungenzeka ingenalo irekhodi elihle kakhulu le-cannabis, kepha izama ukukuguqula lokho. IMissouri ifuna ukubhalisa ngokusemthethweni ama-cannabis ngokusemthethweni ngo-2020. Kodwa ukuze bavote, badinga ukusayinwa abangu-160,199 ngoMeyi 3, 2020. Ngo-2018, eMissouri bavotela ukuthi kudlule uhlelo lweMedical Marijuana neVeteran Healthcare Services olwaziwa ngokuthi ukuchibiyela 2. Ukuchibiyela 2 i-cannabis esemthethweni yokusetshenziswa kwezokwelapha, yaqala ukusebenza intela engu-4%, icacisa ukuthi imali yentela izoya ezinsizakalweni zokunakekelwa kwempilo kubavolontiya. Ukuchitshiyelwa 2 kudlule nama-65.59% amavoti. Ukukhula ekhaya kuvunyelwe ezigulini futhi a izimo ezimbalwa ezifanele faka i-PTSD, IBS, kanye nezimo ezingamahlalakhona.
Ngabe Yini Abantu Abadala Abasebenzisayo Babukeka NjengaseMissouri?
Ummeli we-cannabis waseMissouri, uDan Viets, kanye no AbaseMissourians beNdlela entsha, baqoqa amasiginesha wesinyathelo se-cannabis sokuqala. Ngaphansi kwalolu hlelo:
Abadala abangu-21+ bazovunyelwa ukuthenga nokuthola i-cannabis
Obunye ubugebengu be-cannabis buzokhishwa
Intela eyi-15% izobekwa ekuthengisweni okuthengiswayo
Imali yentela evela ekuthengiseni okuthengiswayo izokwabelwa ikhomishini yezemigwaqo yaseMissouri, i-State Road Fund, kanye nezinhlangano ezingenzi nzuzo ezinikele ekwelashweni kokuluthwa izidakamizwa nasekuvimbeleni ngokweqile
Yini Ummeli We-Cannabis WaseMissouri Angakwenzela?
I-cannabis yezokwelapha ibilokhu esemthethweni eMissouri kusukela ngo-2018. Okwamanje, sibona isifiso esinamandla esivela kwabenzi bezomthetho ukuba benze ngokusemthethweni insangu yokuzijabulisa eMissouri ngo-2020. Lokhu kuzothinta kanjani imakethe yensangu eMissourian? Ngabe sizokwazi ukubona umdlalo olungile emakethe uma kukhulunywa ngokukhula, ukuthengisa, kanye nezinsizakusebenza zensangu embusweni? Sinikeza izimpendulo njengengxenye yeDan Viets and Associates esiza ukudala isimo sezulu esihle samabhizinisi nabasebenzisi bensangu eMissouri.
Ngabe iMarijuana izogunyazwa ngokusemthethweni eMissouri ngo-2020?
Izishoshovu ze-Marijuana zikuvumela ngokuphelele ukumisa imithetho yensangu yaseMissouri. Abavoti bazoba nethuba lokuvotela ukusetshenziswa kwabantu abadala kwensangu eMissouri ngo-2020, okuzovula iminyango yamathuba amaningi ebhizinisi kuleli.
Ukuhlaziywa kwezimali kukhombisa ukuthi umbuso uzokhiqiza imali efinyelela ezigidini ezingama-155 ngonyaka ngonyaka ka-2025. Lezi zibikezelo zikhuluma ngamathuba wamathuba ebhizinisi kulo mbuso. Amazwe amaningi akhiqiza imali enkulu yokubonga kuhlelo lokulawula oluvumela abasebenzisi be-cannabis ukuthi badle insangu.
Uma kukhulunywa ngensangu yezokwelapha, ukuqagela kusitshela ukuthi, ngonyaka ka-2020, kuzoba neziguli ezingama-19,000 ezibhalisiwe zensangu eMissouri. Bonke bafanelwe ikhadi elisemthethweni lensangu elizosebenza njengemvume yokusebenzisa insangu ngezinjongo zokwelashwa.
Kusho ukuthini ukuthi iMarijuana Legalization Yezinkampani ezizimele eMissouri?
Ekuvoteni ngoNovemba 2020, abavoti eMissouri bazoba nethuba lokuvotela ukwenziwa kwe-cannabis ngokusemthethweni okufanele kuvunyelwe abantu abaneminyaka engama-21 noma ngaphezulu ukuba ne-eveni eyodwa yensangu ephethwe ngokusemthethweni. Ukuthengwa kuzokwenzeka ukwenza kusuka kubathengisi abanamalayisense manje abazama ukuthola amalayisense ukuze babe yingxenye yemakethe ye-cannabis evulekile.
Umbuso umemezele ukuthi kuzokhishwa amalayisense angu-192 kulo nyaka eMissouri, okuyi-16,5% kuphela yazo zonke izicelo ezifakiwe ezizovunywa kulo nyaka. Sekukonke, abafakizicelo abayi-1,163 bazama ukuthola ilayisense yama-dispensaries kulo lonke izwe, elikhuluma ngevolumu yemali etholakalayo engenziwa uma umbuso uvumela abenzi bezicelo abaningi ukuthola ilayisense yokufunda.
Ngokuqhathanisa, iColorado inelayisensi abanikazi bamabhizinisi bangokuzijabulisa be-cannabis abayi-1,577 ngonyaka we-2018. Yize inani lamalayisense akhishwe linciphile kancane ngo-2020, singaphawula ukuthi iColorado izisekela kanjani izinkampani namabhizinisi amancane ahlose ukuba yingxenye yemakethe yaseColorado cannabis. NgoJuni ka-2019, iColorado yaphasisa ama- dollar ayizigidi eziyinkulungwane zamaRandi ku-cannabis state mapato, okungeminye yemikhankaso eminingi yokusebenzisa abantu abadala abanomthwalo wemfanelo.
Umnyango wezempilo osemthethweni ungakhipha amalayisense amaningi ngendlela abafuna ngayo, kodwa umbono wabantu baseMissouri ukuthi izabelo kanye nezindawo zokulima kufanele zikhawulelwe. Izicelo zamalayisense okuhambisa esikhathini zinenqubo yokukhetha eqinile esekwe ohlelweni lokushaya amagoli. Iningi labafakizicelo bakhalaze ngenqubo yokuhlola izicelo ngoba izinkampani ezizimele zinemithetho yazo ezinhlolweni zokuhlola. Uma lokhu kuhlala kungudaba eMissouri, imakethe yendawo yokuhweba insangu ingahle ilahlekelwe yikhono elikhulu lokukhula kwemali engenayo yemakethe.
Abameli BaseMissan Cannabis Bangakusiza Kanjani Ukulawula Ukutholakala Kwezomthetho Kwesikwena Kule Nhlangano?
Ngohlelo oluphelele lwe-cannabis olusemthethweni eMissouri, kuza umbuzo mayelana nokulebula okufanele kwemikhiqizo yensangu. Imithetho yokulebula izothinta iMissouri njengezinye izifundazwe, kufaka phakathi iSouth Dakota neKansas, lapho kufanele kube khona ilebuli yokuhlukanisa imikhiqizo ngendlela ethile. Amaphakheji namalebula kufanele ahlangabezane namazinga asebenza ezincomeni ezisemthethweni. Ukukhangisa nokumaketha kwemikhiqizo nakho kufanele kulawulwe kahle, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokukhangisa kubantu abasha abangaphansi kweminyaka engama-21. Imikhiqizo kufanele ifakwe ilebula ngokucacile futhi ikhangiswe ngendlela engakhanga intsha.
Ngabe Ufuna Ummeli We-Cannabis WaseMissouri Yindlela Enhle Yokuqalisa Ibhizinisi?
Uhlelo lokuthola insangu kwezomthetho eMissouri luqala ukusebenza ngokuphelele ngonyaka we-2020. Sizobona ukuthi lo mbuso ungahambisana kanjani nezifundazwe esezilawule ukusetshenziswa kwensangu kwezokungcebeleka. Iziphathimandla zithi kuzoba yisinyathelo esikhulu embonini yaseMissouri insangu ezindabeni zamalungelo abantu kanye nemithetho yezomthetho.
Uma uhlela ukuvula i-dispensary noma shop yezitolo, kufanele useshele u Ummeli we-cannabis waseMissouri ongakusiza ngemithetho yebhizinisi lensangu edingekayo eMissouri.
Umthetho weDan Viets
UTom Howard ku- I-CannabisIndustryLawyer.com
I-Miggy at Izindaba ze-Canannis Legalization
Unentshisekelo yokuza njengesivakashi? Thumela i-imeyili umkhiqizi wethu ku lauryn@collateralbase.com.